Amakhosi kanye neSundowns babuyela emidlalweni ye-CAF Champions League | Scrolla Izindaba
Amakhosi kanye neSundowns babuyela emidlalweni ye-CAF Champions League
IKaizer Chiefs kanye neMamelodi Sundowns babuyela emidlalweni yabo ye-CAF Champions League ngoLwesibili ebusuku ngemuva kokugxila emdlalweni yasekhaya ngesonto eledlule.
NgeSonto, Amakhosi alibangise e-Angola ukuyodlala nePetro de Luanda kowomlenze wesibili.
Lo mdlalo ka-Group C uzobanjelwa e-Estadio de mhla zi-11 kuLwezi ngehora le-6 ntambama. IChiefs yahlula iqembu lase-Angola ngamabili eqandeni ngesikhathi la maqembu ehlangene emlenzeni wokuqala emasontweni amabili edlule e-FNB Stadium kanti babambene endaweni yesibili ku-Group C.
Amakhosi uma enganqoba futhi ngoLwesibili, lokho kungawashiya edinga ukunqoba umdlalo owodwa kuphela ukuze akwazi ukungena kuma-knockouts. Ngemuva komdlalo wangoLwesibili, iChiefs izosala nemidlalo emibili ezoyidlala: ekuhambeni e-Horoya nasekhaya lapho izobhekana khona nabaholi bamaqembu iWydad Casablanca.
IChiefs izoya emdlalweni wangoLwesibili inethemba lokuqhubeka nemiphumela yayo yakamuva emihle e-Angola. Phambilini bashaye iPrimeiro De Agosto ngelilodwa eqandeni e-Angola ukuze badlulele esigabeni samaqoqo.
Eqenjini labadlali abayi-18 elihambe ngeSonto, unozinti u-Itumeleng Khune ubengekho emsebenzini kulandela ukushona kabuhlungu kukadadewabo.
Khonamanjalo, iSundowns izosingatha lo mqhudelwano ngoLwesibili ngehora le-6 ntambama ibhekene neziqhwaga zase-DR Congo iTP Mazembe e-Loftus Stadium, e-Tshwane.
IDowns iphezulu ku-Group B ngamaphuzu ayisishiyagalolunye ngemuva kwemidlalo emithathu.
Ngesikhathi behlula iMazembe ngamabili kwelilodwa enkundleni yabo yasekhaya baba yiqembu lokuqala ukwenza lokhu kulo mqhudelwano kusukela ngowe-2009. Omphetha be-Champions League yangowe-2016 bazobe bebheke ukwelula umjaho wabo wokungahlulwa emidlalweni engama-25 kuyo yonke imiqhudelwano kule sizini.
Ukunqoba ngoLwesibili kuzobaqinisekisa ngokuthola indawo kuma-knockouts.